कसरी हुन्छ पिडिए ? – Health Post Nepal
२०७५ कार्तिक ८ गते १६:२३
मानव मुटुमा एओटा र पल्मोनरी गरी दुईवटा ठूला नली हुन्छन् । पल्मोनरी नलीमा शरीरमा काम नलाग्ने रगत जम्मा भएको हुन्छ । पल्मोनरी नलीमा फोहोर अर्थात् कार्बनडाइअक्साइड बढी भएको रगत बगेजस्तै एओटामा सफा रगत बग्छ । यी दुईबीचको कनेक्सनलाई पिडिए भनिन्छ ।
पिडिए भएमा फोहोर रगत जानेतर्फ सफा रगत जाने गर्छ । पिडिए आमाको पेटमा हुँदा चाहिने र बच्चा जन्मिएपछि बन्द हुनुपर्ने चिज हो । बच्चा जन्मिएपछि अक्सिजनका कारणले पिडिए बन्द हुन्छ । पिडिए दुईवटा ठूला नलीको बीचमा हुने एउटा कनेक्सन पनि हो । बच्चा जन्मिसकेपछि उक्त कनेक्सन बन्द हुनुपर्नेमा भएन भने त्यसलाई नै पिडिए भएको भनिन्छ ।
पिडिए भएमा फोहोर रगत जानेतर्फ सफा रगत जाने गर्छ । पिडिए आमाको पेटमा हुँदा चाहिने र बच्चा जन्मिएपछि बन्द हुनुपर्ने चिज हो ।
पिडिए भएको कसरी थाहा पाउने ?
बच्चालाई जन्मजात नै मुटुरोग लागेको थाहा पाउने २–३ वटा उपाय छन् ।
– बच्चाको छातीको देब्रे भागमा हात राख्दा एकप्रकारको असाधारण आवाज सुनिएमा पिडिए भएको आशंका गर्न सकिन्छ ।
– उमेरअनुसार बच्चाको तौल नबढेमा पिडिए भएको आशंका गर्न सकिन्छ ।
– बच्चालाई पटक–पटक रुघाखोकी लागेमा पिडिए भएको आशंका गर्न सकिन्छ ।
– जन्मजात मुटुरोग भएका बच्चाले आमाको दूध राम्रोसँग चुस्दैनन् । यसबाट पनि पिडिए भएको आशंका गर्न सकिन्छ ।
पिडिएको उपचार चिरेर वा नचिरी गरी २ प्रकारका पद्धति अपनाएर गर्न सकिन्छ ।
१. डिभाइस क्लोजरको सहायताले गरिने उपचार–
यो तार छिराएर पिडिएलाई बन्द गर्ने विधि हो । धेरै सानो उमेरमा यो विधि अपनाउन कठिन हुन्छ ।
२. ओपन शल्यक्रिया अर्थात् पिडिएलागेसन–
यसमा छातीपछाडिको देब्रे भागमा काटेर उक्त नलीलाई धागोले बाँधिन्छ ।
औषधि खाएर यो रोलाई निको बनाउन सकिँदैन । एकदमै कम बिरामीमा जन्मनेबित्तिकै एक–दुई दिनभित्रै इन्डोमेथासिन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि पिडिए निको नभएमा कि डिभाइस क्लोजरको सहायताले उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, कि त ओपन शल्यक्रिया ।
पिडिए रोकथामका उपाय
जन्मजात हुने यो रोग अग्रजहरूमा भएको छ भने पछिल्ला सन्ततीहरूमा सर्ने (वंशानुगत) रोग हो । यसको रोकथामको कुनै उपाय छैन । रोगको पहिचान भएपछि जतिसक्दो छिटो यसको उपचारमा जानुपर्ने हुन्छ ।